Griego - İspanyolca - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: griego (İspanyolca - Birmanca)
Sin embargo, ni siquiera Tito quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligadoacircuncidarse
သို့သော်လည်း ငါနှင့်အတူပါသော ဟေလသ အမျိုးတို့ကို အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံစေကြ။
ရှေးဦးစွာ၌ယုဒလူ၊ နောက်၌ဟေလသလူ၊ ကောင်းသော အကျင့်ကိုကျင့်သောသူရှိသမျှတို့သည် ဘုန်းအသရေချမ်းသာကို ခံစားရကြလတံ့။
tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo (el judío primero, y también el griego)
ရှေးဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ နောက်၌ဟေလသလူ၊ ဆိုးညစ်သောအမှုကို ပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကြီးစွာ သော ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကို ခံရကြလတံ့၊
Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan
ယုဒအမျိုး၊ ဟေလသအမျိုးကိုမရွေး၊ လူ အပေါင်းတို့ကို အစိုးရသော အရှင်တပါးတည်းရှိ၍၊ ကိုယ်တော်ကိုပဌာနပြုသော သူအပေါင်းတို့၌ ကျေးဇူး ကြွယ်ဝတော်မူ၏။
Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de Dios para salvaciónatodo aquel que cree, al judío primero y también al griego
ငါသည်ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုတရားသည် ရှေ့ဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ နောက်၌ ဟေလသလူ၊ ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကို ကယ်တင် စေသော ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။
သူတို့၏ ရှင်ဘုရင်မူကား၊ ဟေဗြဲဘာသာအားဖြင့် အဗဒ္ဒုန်ဟူ၍၎င်း၊ ဟေလသဘာသာအားဖြင့် အပေါ လျုန်ဟူ၍၎င်း ခေါ်ဝေါ်သော အနက်ဆုံးသောတွင်း တမန်ဖြစ်၏။
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús
LlegóaDerbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego
ထိုနောက်မှ ပေါလုသည် ဒေရဗေမြို့နှင့် လုတ္တရမြို့သို့ရောက် လေ၏။ လုတ္တရမြို့၌ တိမောသေ အမည်ရှိသော တပည့်တော်တယောက် ရှိ၏။ သူ၏ အမိကား၊ ယုံကြည်သောယုဒမိန်းမဖြစ်၏။ အဘကား၊ ဟေလသလူဖြစ်၏။
Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego
ပေါလုသည် ထိုသူကိုခေါ်ခြင်းငှါအလိုရှိ၍၊ သူ၏အဘသည် ဟေလသလူဖြစ်သည်ကိုထိုအရပ်တို့၌ ရှိသောယုဒလူအပေါင်းတို့သည် သိသောကြောင့်၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကို သူ့အားပေးလေ၏။
Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre; sino que Cristo es todo y en todos
ထိုဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူရာ၌ ဟေလသလူမရှိ၊ ယုဒလူမရှိ၊ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံခြင်းမရှိ၊ မခံခြင်းမရှိ၊ လူရိုင်းမရှိ၊ သကုသိလူမရှိ၊ ကျွန်မရှိ၊ လူလွတ်မရှိ၊ ခရစ်တော်သည် အလုံးစုံတို့၌ အလုံးစုံဖြစ်တော်မူ၏။
ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားသောအရပ်သည် မြို့နှင့်နီးသည်ဖြစ်၍၊ ထိုလိပ်စာကို ဟေဗြဲ ဘာသာ၊ ဟေလသဘာသာ၊ ရောမဘာသာအားဖြင့် ရေးထားသောကြောင့် ယုဒလူများတို့သည် ဘတ်ကြ၏။
Cuando ya ibaaser metido en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: --¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: --¿Sabes griego
ပေါလုသည်ရဲတိုက်ထဲသို့ဝင်လုသောအခါ၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်နှင့် စကားပြောရပါမည် လောဟု စစ်သူကြီးအားမေးလျှင် စစ်သူကြီးကသင်သည် ဟေလသစကားကိုပြောတတ်သလော။
Acá en la frontera macedonio/griega están rechazando los paquetes de ayuda de la Cruz Roja porque tienen una cruz roja en la caja.
ဤကိစ္စနှင့် ပက်သက်ကာ Twitter ပေါ်တွင် လူအများအပြားက ဒုက္ခသည်များဟာ "ကျေးဇူးမသိ" ဟု အမျက်ဒေါသနှင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ ကြသည်။
El graffiti moderno (de la palabra griega graphein que significa escribir) nace en los años 60 en Nueva York , inspirado por la música hip-hop.
ဂရပ်(ဖ်)တီဆိုသောစာလုံးသည် ရေးသားသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဂရပ်ဖိန်းဟူသည့် ဂရိစာလုံးမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadíaajudíos yagriegos
ပေါလုသည်လည်း ဥပုသ်နေ့မပြတ် တရားစရပ်၌ ဆွေးနွေး ဟောပြော၍၊ ယုဒလူနှင့်ဟေလသလူတို့ကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်လေ၏။
En consecuencia, creyeron muchos de ellos; y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres, no pocos
ထိုကြောင့်၊ ယုဒလူအများတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ အသရေထင်ရှားသော ဟေလသမိန်းမ တို့နှင့် ယောက်ျားအများတို့သည် လည်း ယုံကြည်ကြ၏။
Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios
သို့သော်လည်း၊ ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဟေလသလူ ဖြစ်စေ၊ ခေါ်တော်မူသောသူတို့၌ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုး တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ပညာတော်တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ တရားဖြစ်၏။
Tantoagriegos comoabárbaros, tantoasabios comoaignorantes soy deudor
ဟေလသလူဖြစ်စေ၊ လူရိုင်းဖြစ်စေ၊ ပညာရှိဖြစ်စေ၊ ပညာမဲ့ဖြစ်စေ၊ လူအမျိုးမျိုးတို့၏ကြွေးသည် ငါ၌တင်လျက်ရှိ၏။
gritando: "¡Hombres de Israel! ¡Ayudad! ¡Éste es el hombre que por todas partes anda enseñandoatodos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar! Y además de esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo.
ဤသူကား၊ ငါတို့အမျိုးနှင့် ပညတ်တရားကို၎င်း ဤအရပ်ဌာနကို၎င်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍၊ လူအပေါင်းတို့အား ဆုံးမဩဝါဒ ပေးသောသူဖြစ်ပါ၏။ ထိုမျှမက၊ ဟေလသလူတို့ကို ဗိမာန်တော်ထဲသို့သွင်း၍၊ ဤသန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို ညစ်ညူးစေပြီတကားဟု ဟစ်ကြော်၍၊ ပေါလုကို ဘမ်းဆီးကြ၏။
herval (Hollandaca>Fransızca)le mail non sono state inviate (İtalyanca>İngilizce)te takua (Arnavutça>İngilizce)yerim onu (Türkçe>İngilizce)sotterraneo (İtalyanca>Xhosa)сумгайыта (İngilizce>Rusça)e ora ti racconto (İtalyanca>İngilizce)gruppato (İtalyanca>İngilizce)judith (Fransızca>Rusça)wag mo akong alalahanin ok lang ako (Tagalogca>İngilizce)bestätiger (Almanca>Rusça)wish herahappy birthday (İngilizce>Hintçe)zhduku (Arnavutça>Almanca)szia :p (Macarca>İngilizce)spacey (İngilizce>Rusça)summoning witness (İtalyanca>İngilizce)energikälla (İsveççe>İngilizce)de allá son de lana (İspanyolca>İngilizce)yo vivo en (İspanyolca>Keçuva)nous somme nos choix (Fransızca>Almanca)kutufanya (Svahili>Maori)hautinfektion (Almanca>Rusça)saxi move videos (Hintçe>İngilizce)andas de fiesta (İspanyolca>İngilizce)